Daawo Ra''isulwasare Saacid oo sidii Hitler u bixinaya Salaan.
31 March 2013 Waagacusub.com-Sawiro laga qaaday safaradii Raísulwasare Saacid ku tegay Garowe,Galkacyo,Dhuusamareeb,Caabudwaaq,Marko,Kismayo ,Beledweyne iyo Jowhar ayaa dhamaantood si isku mida muujinaya isagoo bixinaya salaan lagu xasuusto manaxihii dunida soo maray ee Adlor Hitler. Sawirkii ugu dambeeyay ee looga qaaday Jowhar ilaa kii ugu horeeyay ee Marko wuxuu Raísulwasaraha bixinayaa salaan gacan taag togan taas oo Xeeldheerayaashu Calaamatu Su''aal saareen? waxa uu kala jeedo.
Dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu salaanta uga dayanayaan Hitler halka tira yarna qabaan inay ka tahay aqoondaro.
Inkastoo Warbaahinta Waagacusub ku deg degi karin sababta Ra''isulwasaraha u jeclaaday inuu salaan bixinta uga daydo Hitler hadana waxay salaan bixintiisu tahay mid laga xanaaqo dalalka reer Galbeedka gaar ahaan Yahuuda oo si arxan daran u xasuuqay Hitler.
Adolf Hitler wuxuu ahaa Nin u dhashay Austria oo ka mida Siyaasiyiinta Jarmalka ,wuxuuna noqday Hogaamiyaha Xisbigii Nazi Part ee afka Jarmalkana loogu yeeri jiray Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); halka micna ahaana uu Ingiriisku yahay National Socialist German Workers Party .
Dagaalkii labaad ee dunida ayuu ADLOR HITLER taariikh muruga badan ku reebay dalalka Yurub iyo Holocaust.